फरक विश्व Archives - Page7of 8 - Paschimnepal.com
मान्छे मर्दा शोक होइन, खुशीको उत्सव मनाउने ठाऊँ…!
आफन्त मर्दा शोक मनाउनु स्वभाविक हो । आफ्ना आफन्तलाई गुमाउनु पर्दा कसलाई खुसी मनाउन मन लाग्छ र तर दुनियामा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ मान्छे मर्दा शोक होइन खुसी मनाइन्छ । इण्डोनेसियाको दक्षिण सुलेवासी प्रान्तमा बस्ने टोराजा आदिवासी समुदायले मान्छे मर्दा खुसीको उत्सव मनाउँछन् । यहाँ दुख व्यक्त गर्ने तरिका तथा ठाउँ विल्कुल उल्टो छ । यो समुदायका मानिसहरुले आफ्नो मान्छेहरुलाई यतिधेरै प्रेम गर्दछन् की मृ
जेलबाट भागेर सेल्फी खिचेपछि…
ब्राजिलको उत्तरी सहर मनाअसमा कारागारमा भएको झडपका क्रममा जेलबाट भागेका एक कैदीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । जेलबाट बाहिर भाग्दै गरेका ती कैदीले फेसबुकमा तस्बिर पोस्ट गरेका छन् । ब्रायन ब्रेमेर नाम गरेका ती कैदीले एक अर्का भगौडासँगै सेल्फी खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गरेका हुन् । उनको पछि अर्का भगौडा पनि देखिएका छन् । प्रहरीले ब्रेमेरका साथीलाई भने पुनः पक्राउ गरिसकिएको जनाएको छ । मनाअमा
कसरी गाँठो पार्छिन यी महिला आफ्नो कम्मर ?
यो तस्बिर र भिडियोमा एक जना महिलाले आफ्नो कम्मरलाई पूरै गाँठो पारेकी छन् । यो तस्बिर र भिडियोमा कम्मर पातलो हुँदै गएर आफै गाँठो परेको देखिन्छ । सर्बियाकी मेकअप आर्टिस्ट मिरजाना किकाले यस्तो अनौठो खुबी देखाइन् की उनको प्रस्तुति देख्नेहरु नै तिनछक परे । उनले आफ्नो कम्मर फनक्कै गाँठो पारिन् । वास्तवमा यो सम्भव हुनै नसक्ने कुरा हो । वास्तवमा उनले कम्मर गाँठो पारेकी होइनन् । आफ्नो कम्मरमा यस्तो
अनुहार मिलेपछि बालकलाइ अफरै अफर
नेपालकी तरकारीवाली र पाकीस्तानका चायवालपछि हाल चीनमा एक वालककाे अनुहार धनी व्यक्तिसंग मिलेपछि उनकाे तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकाे छ । चीनकाे पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने ८ वर्षीया एक बालक पछिल्लाे समय दैनिक चर्चाकाे विषय बन्नुकाे मुल कारण याे हाेकी उनी त्याे व्यक्ति जस्तै देखिन्छन्, जुन चीनकाे चर्चित एक धनी व्यक्तिकाे अनुहारसंग मिल्छ । ८ वर्षका यी बालककाे नाम फू श्या किन हाे । उनकाे अनुहा
पत्याउनु हुन्छ, जहाँ एक किताबकाे पन्ना १६ लाख डलरमा बिक्री भयाे !
जासूसी दुनियाकाे जानेमाने कार्टुन किरदार टिनटिनकाे एक कार्मिक स्ट्रिपकाे विक्री १५.५ लाख युराे अर्थात १६.४ लाख डलरमा विक्री भएकाे छ । पेरिसमा विक्री याे स्ट्रिपकाे असल पन्न चीनका स्याहीले बनाएका थिए । यसमा 'एक्सप्लोरर्स ऑन द मून' कहानीकाे एक भाग देखाइएकाे छ । जुन बेल्जियमका कार्टूनिस्ट जॉर्ज रेमीले बताएका थिए । उनी एर्ज़ेकाे नामबाट पनि परिचित छन् । यसमा स्पेससूट पहिरन टिनटिन र उनका कुर्त
तरकारी किन्न बजारमा जाने गृहिणीहरुको दैनिकजसो गुनासो हुनेगर्छ की तरकारीको भाउले आकास छोइसक्यो । बजारको मामुली तरकारीको भाउले समेत आकास छोइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यदि उनीहरुलाई दुनियाकै सबैभन्दा महंगो यस तरकारीको बारेमा सुनाइदिने हो भने साँच्ची आफ्नै कानमाथि विश्वास गर्न सक्दैनन् होला । दुनियाको सबैभन्दा महंगो तरकारीको भाउ सुन्दा जो कोहीपनि तिनछक पर्दछ । दुनियाकै सबैभन्दा महंगो तरकारी
कुखुराले ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा पक्राउ
गाडी चालक तथा पैदल यात्रुले हरेकले सडक पार गर्नका लागि ट्राफिक नियम हुन्छन् । यस्ता नियाम पालना गर्न अनिवार्य छ । मान्छेले ट्राफिक नियम पालना नगर्दा कारबाही हुन्छ । तर, स्कटल्याण्डमा भने ट्राफिक नियम मिचेको भनेर कुखुरालाई कारवाही गरिएको छ । निकै व्यस्त ट्राफिक रहेको पिक आवरमा सडक पार गरिरहेको कुखुरालाई पुलिसले बजार क्षेत्रबाट गिरफ्तार गरेको हो । कुखुराले नियम विपरित सडक पार गरिरहँदा ट्राफिक जाम थ
ट्रक ड्राईभरका लागि छुट्टै कण्डम
भारतमा हालसालै नया ब्रान्डको कन्डमको लन्च भएको छ । यसको नाम हो डिप्पर । उक्त कण्डम विशेष गरी ट्रक ड्राइभरहरुलाई लक्षित गरी बनाइएको हो । यो कण्डमको नाम कसरी रह्यो होला रु चासोको विषय हुन सक्छ । वास्तवमा भारतीय ट्रकहरुका पछाडि लेखिने चेतावनीमूलक शव्दावलीहरुबाट यो नाम लिइएको हो । ट्रकको पछाडि लेखिएको हुन्छ रातको समयमा डिप्पर प्रयोग गर्नुहोस् । यो सन्देशको आफ्नो अर्थ छ । यस अनुसार रातको समयमा ट्रक च
कार्टुनको विश्व इतिहास जान्नुहोस्
कार्टुन काँडा हो, सँगै फुल पनि । कार्टुन, क्याक्टसको प्रतिबिम्ब हो जसको आङभरी काडा हुन्छ र मरुभुमिमा पनि जीवनको आशा जीवित राख्दछ । कुनै कुराको नक्कल गरी बनाइएको ब्यङ्ग्य र बिनोद मिश्रित चित्रलाई सामन्यतया कार्टुन भनिन्छ । यसको प्रयोग हिजोआज टेलिभिजन र वेभसाइटमा पनि हुन थालेको छ । कार्टुन मूलतः छापा पत्रकारिताकासँग सम्बन्धित छ । आज हामी कार्टुनको विश्व इतिहासका विविध पाटा केलाउने प्रयास गदैछौं ।
विश्वका सात अनौंठा स्वीमिङ्ग पुल (फोटोफिचर)
रीटी राह, माल्दीप रीटी राह एक सय फीट गहिरो छ । यो स्वीमिङ्ग पुलमा रमाउनेहरुका लागि शान्त र आराम महसुश हुने गरी निर्माण गरिएको छ । मरीना बे सैंड्स होटल सिंगापुर ५७ तला रहेको यो होलटरको ५ सय फिट ठुलो स्वीमिङ्ग पुल रहेको छ । यहाँ पुग्ने आगन्तुक आफै आश्र्चयमा पर्ने गर्दछन् । यही होटलबार सिंगापुरका अधिकाँश दृष्य हेर्न सकिन्छ । कतिकींज होटल, सैंटोरिनी, ग्रीस यस होटलमा अत्याधिक चिसो पानी रहेको स